Dị Ọcha Na-aṅụ Mmiri Ọgwụgwọ System - China Xi'an Homey Technology
Dị Ọcha Na-aṅụ Mmiri Ọgwụgwọ System
1. Multi-media nyo 250L / H OA Kwadoo RO Clean Water Machine maka Mmanya. The multi-media nyo na ọtụtụ-eji mmiri ọṅụṅụ ọgwụgwọ wepụ dị iche iche nke ahụ, dị ka kwụsịtụrụ solids (turbidity), colloidal ogige ma etc, huu ẹdụk mmiri si TDS bụ ihe na-erughị 5. Usoro a ga-belata ibu na azụ-ọgwụgwụ ezi filters.Diffuser E diffuser, arụnyere na iyo. Ha isi ọrụ bụ ime ka abịakọrọ ikuku na mmiri na-ekesa ...
Model nọmba: HMJRO-250LPH (1500GPD)
Pịnye: With ájá iyo, carbon iyo na softener
Na-akwọ ụgbọala moto: 380V, 50HZ, 3-adọ ma ọ bụ 220V 50HZ / 60HZ otu adọ
Ọ dịghị nke RO akpụkpọ ahụ: 1 pc nke 4040 akpụkpọ
Raw mmiri TDS: banyere 2000ppm
Ijupụta TDS: erughị 100ppm
1. Multi-media nyo
250L / H OA Kwadoo RO Clean Water Machine maka Mmanya. The multi-media nyo na ọtụtụ-eji mmiri ọṅụṅụ ọgwụgwọ wepụ dị iche iche nke ahụ, dị ka kwụsịtụrụ solids (turbidity), colloidal ogige ma etc, huu ẹdụk mmiri si TDS bụ ihe na-erughị 5. Usoro a ga-belata ibu na azụ-ọgwụgwụ ezi filters.Diffuser E diffuser, arụnyere na iyo. Ha isi ọrụ bụ ime ka abịakọrọ ikuku na mmiri na-ekesa evenly n'oge backwash na mmiri nkesa.
2. The ifịk carbon nyo bụ isi ngwaọrụ, ọtụtụ ndị na-eji maka na mwepụ nke organic umi na arọ metal mmewere, kwụsịtụrụ solids, mmapụta chlorine na wdg O nwere ike n'ụzọ dị irè ibelata okporoko ma melite uto nke mmiri. The usoro a mgbali iyo. Na iyo, na quartz na Aki oyibo shei activecarbon bed na-arụrụ ọrụ. The ọrụ carbon na-onwem na ekupụ valving na kasị elu mgbe na adrain njikọ na ebe kasị ala mgbe. The esịtidem usoro na mmiri ọ bụla na tank na-wuru nke frp ihe onwunwe.
E diffuser, arụnyere na t iyo. Ha isi ọrụ bụ ime ka abịakọrọ ikuku na mmiri na-ekesa evenly n'oge backwash na mmiri nkesa.
3. Security nyo (katrij Filters)
The nche nyo na-akacha eji maka emeso mmiri. The dum usoro jiri mere otu set nke igwe anaghị iyo. E nwere 5 iberibe polypropylene ọ bụla 5μ Myọcha cartridges, nzacha ọgụgụ ka ukwuu nke ahụ na mmiri, nke eases ibu nke RO akpụkpọ ahụ. Nke a usoro nke filtration uru nyo katrij na prolongs ya ndụ na usoro.
Nke a ngwa nwere filtration akụrụngwa na igwe anaghị support n'ígwé. The support oyi akwa ka nke igwe anaghị agba ígwè 304, na uru nke kọmpat Ọdịdị, mara mma udi, elu agbanwe oge, ezi filtration ziri ezi na wdg a na ngwa na-ruo eruo na ikuku igbapu valvụ na ala ala ikuku igbapu valvụ na akụkụ igbapu valvụ.
4. Reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ modul (RO)
RO usoro bụ isi akụkụ maka na mmiri ọgwụ usoro, nke na ọtụtụ-eji na-eme ka dị ọcha na mmiri na-aṅụ mmiri. RO akpụkpọ ahụ na-ewepu ọtụtụ ụdị nke nnukwu ụmụ irighiri na ion si ngwọta site n'itinye nrụgide ngwọta mgbe ọ bụ na otu akụkụ nke a nhọrọ akpụkpọ ahụ. N'ihi bụ na solute dị ka ígwè, Virus, bacteria na solids na-nọgidere na pressurized n'akụkụ nke akpụkpọ ahụ a na-agwaghị ihe mgbaze na-ekwe na-agafe n'akụkụ nke ọzọ.
The ọjà, valves na oyiyi akwa (gụnyere tubing) bọl valves, urukurubụba valves, piping eji usoro bụ SS304. Laa azu nwayọọ nwayọọ amịkọrọ modul na-onwem na sample valvụ n'ihi na mma-elele ngwaahịa mmiri.
6. Control ngwaọrụ
dum akpaka mmepụta akara a na-enweta site na Ntụgharị na PLC programmer na data mkpoko dị ka mmiri mmiri menjuobi mmetụta, eruba mmetụta na wdg dum mmepụta akara na-ekwu site na n'ime ime obodo na kọmputa. Mgbe mmiri larịị nke ngwaahịa mmiri tank dị elu, na usoro ga-akwụsị na-akpaghị aka. Mgbe mmiri larịị nke ngwaahịa mmiri tank bụ ala, na usoro ga-agba ọsọ na-akpaghị aka.
7.picture maka akwụkwọ
Previous: Commercial Reverse nwayọọ nwayọọ amịkọrọ Water Ọgwụgwọ System
Osote: Ọcha Water Ọgwụgwọ Plant
Ịchọ mma Water Ọgwụgwọ System
Customerized Ro Water Ọgwụgwọ Plant
Demineralized Water Ọgwụgwọ Plant
Aṅụ Water Equipment
Aṅụ Water Ọgwụgwọ Ro System
Househould Water Ọgwụgwọ System
Large n'ọtụtụ Water Ọgwụgwọ
Mobile Water Ọgwụgwọ Plant
Purifier Water Ọgwụgwọ Plant
Laa azu nwayọọ nwayọọ amịkọrọ ịchọ mma Water Ọgwụgwọ
laa azu nwayọọ nwayọọ amịkọrọ Water System
Ro Drinkable Water Ọgwụgwọ
Ro Mmanya System
Ro ọcha Ṅụọ Mmiri Ọgwụgwọ
Salt Water Ọgwụgwọ System
Water Ọgwụgwọ Usoro Equipment
Water Ọgwụgwọ Ro System
Ọfọn Water Ọgwụgwọ System
Standard RO na mmiri ọgwụ usoro (HMJRO-250LPH)